Maxaad ka ogtahay lacagta uu haysto Barack Obama | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Maxaad ka ogtahay lacagta uu haysto Barack Obama
Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama ayaa falanqayn lagu sameeyey dhaqaalihiisa iyo meelaha uu ka helay, waxaana la sheegay in xilligii uu ahaa sanator ka tirsan baarlamaanka dalkaas iyo madaxweyne uu kasbaday 20 milyan oo dollar, isagoo wixii intaas ka dambeeyeyna meelo kale u leexday si uu dhaqaale u helo.
Waxay warbixinta laga aruuriyey sheegaysa inuu 1,2 milyan doolar ka helay muxaadarooyin iyo khudbado uu ka jeediyey munaasabado uu ka qaybgalay. Shir ka dhacaya bannaanka magaalada Oslo oo uu haatan ka qaybgalayo Barack Obama ayaa la sheegay in la qariyey lacagaha ka soo geli kara, iyadoo la xusay in tigidhada lagu galayo nuuca ugu qaalisan laga gadanayo 32000 krone.
Waxaa la sheegay in lacagta dhabta ah ee uu haysto Obama aan la garanayn laakiin lagu qiyaasayo tobanaan milyan oo doolar. Waxaa jira warar warbaahinta qaar qoreen oo sheegaysa in qoyska Obama ay haystaan 40 milyan oo dollar oo u dhiganta 324 milyan oo krone laakiin arrintaas lama xaqiijin karo.
Warbixino kale ayaa sheegaya in 20 ka milyan ay ka heleen Obama iyo xaaskiisu ilo dhaqaale oo isagu jira mushaar, lacag ka soo xarootay buubaag la iibiyey iyo maalgelin taasoo ay heleen wixii u dhexeeyey 2005 illaa iyo 2017 markii uu ka banneeyey aqalka cad. TV-ga CNN barnaamijkiisa CNN money ayaa lagu xusay in Obama uu haystay 1,3 milyan dollar markii uu soo degay aqalka cad ee Maraykanka.
Jaamacadda The American University ayaa ku qiyaastay lacagta Obama uu helay wixii ka dambeeyey markii ka degay madaxtinimada 242,5 milyan oo doolar, taasoo uu ku helay hadalo uu jeediyey iyo heshiisyo buubaag.